ဘန်းကျော်သားတို့ အသည်းစွဲ Freegate 6.80 ထွက်လာပါြ&#4 — MYSTERY ZILLION
ဘန်းကျော်သားတို့ အသည်းစွဲ Freegate 6.80 ထွက်လာပါြ&#4
January 2009 edited January 2010 in Internet & Email
ဘန်းကျော်သားတို့ အကြိုက် Dynaweb Internet Technology မှ Freegate 6.80 ထွက်လာပါပြီ။ ကျွန်တော် သုံးကြည့်ရသလောက် Yahoo Mail, GMail, Mysteryzillion စတဲ့ website တွေကောင်းကောင်းရပါတယ်။ Shareware version freegate ဆိုပြီး မပေါ်ပါဘူး။ အခြား limitation တွေတော့ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သေချာ မစမ်းရသေးပါဘူး။ Freegate စ run ပြီးတော့ home page တက်လာချိန်မှာ စာတွေပါပါတယ်။ End User License Agreement (EULA) ပါလာပါတယ်။ Non-commercial use အတွက်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ချင်သူများအတွက် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။ ဘန်းကျော်သားတို့ အောင်မြင်စွာ ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။
F2 Tunneling မရပါဘူး။ Time limitation ရှိပါတယ်။ သုံးတဲ့အချိန် ကြာလာရင် Shareware စာသားကြီး ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ခဏတာပဲ သုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်။ Full version ထွက်လာရင်တော့ စျေးနှုန်း သင့်တင့်ရင် ဝယ်သုံးသင့်ပါတယ်။ Ultrasurf ထက် အများကြီး ပိုငြိမ်ပါတယ်။ စမ်းသုံးဘူးသူများ ရှိရင်လည်း Feedback လေးပေးကြပါဦး။ 6.79 မှာတော့ Google နဲ့ GMail ပဲရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ site တွေ လုံးဝ မရပါဘူး။ 6.80 မှာတော့ အချိန် ကန့်သတ်ချက်လေး ရှိပါတယ်။
သုံးနည်းလေးပါ ရှင်းပြပါလားခင်ဗျား။ လောလောဆယ်တော့ U92 နဲ့သုံးနေတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေ အဆင်မပြေတော့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်လို့ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တာ proxy တွေပြောင်းကုန်ပြီး မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ U92 လို မရှင်းဘူး။ ကျေးဇူးပဲ
Freegate ကို run လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင် Internet Explorer တက်လာပြီး စာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Address Bar (လိပ်စာရိုက်တဲ့နေရာ) မှာ ကိုယ်ရိုက်ချင်တာရိုက်ပြီး ဆက်သွားလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ၅ မိနစ်လောက်ပဲ ရလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ shareware ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ Mozilla Firefox မှာ သုံးချင်ရင်တော့ 127.0.0.1 Port 8580 ထားပြီးသုံးပါ။
mail2vista wrote: »
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါ..ကျွန်တော်တို့က ဘန်းကျော်သားတွေဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေပဲ လိုက်ရှာနေရတယ်လေ...
ကျွန်တော် proxy script လေးတစ်ခုဒီ forum မှာတင်ပေးဘူးပါတယ် ဘယ်နားမှာလဲဆိုတာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး
အဲdဒါလေးကို ကိုယ့်ရဲ့ hosting မှာပဲဖြစ်ဖြစ် free hosting မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ပြီး run ကြည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်:)
ဘန်းကျော် software တွေမှာ Freegate မရတော့ တော်တော်လေးခက်လာပါတယ်။ Freegate (အမည်သစ် - Paygate လို့ ခေါ်ရအောင်) က shareware ဖြစ်သွားရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန် run လိုက်ပါ။ ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ် လောက်ထိ ထပ်ရပါမယ်။
Ultrasurf က မငြိမ်ဘူးခင်ဗျ။ Freedom ကလေးပါတယ်။ GPass ကလည်း မကောင်းဘူး။ GTunnel က အဆိုးဆုံးပါပဲ။ ဘန်းကျော် software တွေကလည်း တော်တော်လေးရှားလာတယ်။ ရှိတဲ့လူများလည်း ကူညီကြပါဦးလားဗျာ။
Firephoenix သုံးဘူးကြလား။ သူက တရုတ်စာကြီးပဲ ရေးထားတယ်။ TAP-32 adapter နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ နားမလည်လို့ ဆက်မသုံးတော့ဘူးဗျ။ တရုတ်စာ နားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ကူညီကြပါဦး။
jap ဆိုတာလေးရှိတယ်။ လက်ရှိ ubuntu မှာသုံးတာတော့ အဆင်ပြေတယ်။ တခါတလေ ကိုယ့် server မှာ phpproxy လေးသုံးပြီး ကျော်တယ်။ 00webhost မှာတော့ သွားမတင်နဲ့နော်။ မရဘူး။
Port တွေက 127.0.0.1 4001ပါခင်ည။
I think Jando is also same JAP
တကယ့်ကို စိတ်ကုန်စရာပဲနော်... အရင်က Free Gate က Connection မကောင်း တကောင်းအချိန်မှာတောင် သုံးလို့ရလာတယ်..။ ခုတော့ ဒီလို ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးရမယ်ဆိုတော့ စိတ်တောင်ကုန်တယ်...။software company ကလည်း ပါးတယ်နော်.. လူသုံးများတာနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတာချည်းပဲ...။
Freegateနဲ့တူတဲ့ software အမြန်ဆုံး ပေါ်လာပါစေ..။ ဒါမှ ကျော်ရခွရ အဆင်ပြေမှာ..။
ဒီမှာပြောထားတဲ့ JAP နဲ့စမ်းကြည့်ပါလား။ ကိုစေတန် ဟိုတလောကနေမကောင်းဖြစ်တယ်လေ။ သက်သာလာတဲ့အချိန် သူဖွင့်ထားတဲ့ Thread ပါ။
saturnofgod wrote: »
အခုမှ down မလို့ access denied ဖြစ်သွားပြီ။
ကျွန်တော် www.ifile.it မှာပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ။
သူလည်းကောင်းနေတာပဲ ။ yahoo mail , messenger သုံးလို့ရတယ် ။
:106::106:ကျွန်တော်ဆီမှာ Freegate 6.80 ရှိတယ်
ဘယ်လို upload လုပ်ရမယ် မသိဘူးဖြစ်နေတယ် စမ်းသပ်တင်လိုက်တယ်
time limit မဖြစ်ဘူး အသုံးပြုနေတာ ကြာပြီ
လုပ်ပါအုံးဗျ နှိတ်ကြည့်တော့ ဖိုင်က မရှိတော့ဘူး
kse.zaw wrote: »
ဘယ်နားမှာယူ ရမလဲ ဗျ လင့်မှာ မတွေ့ရဘူး
ကျနော် မှာ ရှိနေ တာက ၆.၈၆ ဖြစ်နေပါ တယ်
တူလား မတူလား မသိ ဘူး ဗျ
mediafire က access denied ဖြစ် နေတော. down လို. မရလို. ပါ
download link လေးပါ ဖော် ပြလိုက် ပါ တယ်